INDLU ENTLE esecaleni kweRiverside/imizuzu eyi-15 ukusuka ePuy du Fou - I-Airbnb
INDLU ENTLE esecaleni kweRiverside/imizuzu eyi-15 ukusuka ePuy du Fou
Indlu yamatye endala enomtsalane ngasemlanjeni ekwindawo entle / Inikwe iinkwenkwezi eziyi-3 yiOfisi Yabakhenkethi yaseFransi/Ifumaneka kwimizuzu eyi-10 ukusuka kwi-A87 motorway nemizuzu eyi-15 ukusuka kwi-Grand Parc du Puy du Fou.
Iindwendwe ziyakwazi ukufikelela kuwo onke amagumbi endlu kunye negadi engasentla kwendlu, engena kwigumbi lokulala eliphezulu, kwigumbi lokuhlambela, okanye kwindlela yamatye engasemva kwendlu, ephela ngomnyango ompunga ovula ngesitshixo esikhulu.
4.67 out of 5 stars from 110 reviews
4.67 · Izimvo eziyi-110
Imbali YE-Saint LAURENT SUR Sèvre: ISIXEKO ESINGCWELE
Embindini weVendée bocage, iikhilomitha eziyi-10 ukusuka eLe Puy-du-Fou, iSaint-Laurent-sur-Sèvre igama layo nguLouis-Marie Grignion de Montfort kwaye yamkela iindwendwe eziphantse zibe ngu-25,000 ngonyaka, njengoJohn Paul II eJohane. Kwakhona uza kukuvuyela ukwakhiwa kweBasilica yaseMontfort ngohlobo lweRomano-Byzantine kunye nokundwendwela iigadi zoLuntu Loluntu Loluntu Oluphucukileyo kunye nesakhiwo sayo sobulumko, esakhiwe ngasekupheleni kwenkulungwane ye-19 ngesitayile se-neo-Gothic, kunye nenqaba yayo yentsimbi ekwiimitha eziyi-81. Inkcazelo engakumbi kwiwebhusayithi yonxibelelwano lwe-Saint Laurent sur Sèvre. Iindlela
Kwindawo ohlala kuyo, endaweni yokubizwa ngokuba yiDomaine, ukwisiphaluka sokunyuka intaba esecaleni komlambo esiza kukusa, xa ukhetha ukuya eSaint Laurent-sur-Sèvre, kwiinduli zehlathi okanye kwiintaba zaseBarbin.
Ukuze ufumane inkcazelo engakumbi, nceda uye kwiwebhusayithi yeVendée Vallée okanye kwiwebhusayithi kamasipala waseSaint Laurent sur Sèvre.
EZONA NDAWO ZIFANELEKILEYO ZOKUTYA
EKUFUTSHANE : i-Muse Gueule, imizuzu eyi-3 xa uhamba ngemoto ukusuka e-Real.
I-ITALIAN plus: Laurentaise pizzeria, kwidolophana yaseSaint Laurent sur Sèvre.
I-plus YASEKUHLALENI: i-Shockadélicafé, kwisikwere selali, eMallièvre. i-100% yeemveliso ZASEKUHLALENI!
Ukongezelela KWINDALO : iAuberge de Poupet, embindini wentlambo iSèvre.
EYONA NDAWO IDUMILEYO: ivenkile yokutyela yaseChâteau de la Barbinière, eSaint Laurent-sur-Sèvre. Uludwe lwewayini oluthandekayo njengebhonasi !
IIMARIKE kunye NEEMVELISO
zefama Ukuba unalo ixesha, ungcamle kwaye unqwenela, zivumele ukuba uzivise ngohambo oluya emarikeni okanye uye ngqo efama ukuze uthenge imifuno, iimveliso zobisi, inyama kunye nenkukhu kunye nezinye iimveliso ezintsha, yiya kule dilesi apho uza kufumana yonke inkcazelo eluncedo yokwanelisa iminqweno yakho.
specialties kunye newayini Ukongezelela kwimbali yayo kunye nomhlaba oluhlaza, iVendee ikwanazo neentlobo ezininzi zokutya: ikhaphethi, i-ham, i-brioche kunye ne-grinder, i- holepinette, i-Noirmoutier potato, njl njl. Izinto ezininzi ezikhethekileyo endiza kuzifumana ngokulula kwishishini kuquka icandelo elithi "Iimveliso Zasekuhlaleni" kwiCarrefour de Saint Laurent sur Sèvre.
Ukongezelela, ukuba unexesha, ndicebisa ukuba uye kwi-Prieuré La Chaume, eyona ndawo isemazantsi yeLoire Valley, phakathi kweLoire kunye ne-Médoc, uze ungcamle iwayini kaKrestu Chabirand. Ngokuqinisekileyo eyona wayini imnandi eVendee.
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Mortagne-sur-Sèvre